Isbitaalka labaad ee qaraabada la ah Jaamacadda Harbin Medical University - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Isbitaalka Labaad ee Isku-xidhka ah ee Jaamacadda Caafimaadka ee Harbin
Isbitaalka Labaad ee Isku-xidhan ee Jaamacadda Caafimaadka ee Harbin, oo la aasaasay 1954, waa isbitaal ballaadhan oo ballaadhan oo Heerka Koowaad ah ee Fasalka 3. Waxay isku dhafan tahay daaweynta caafimaadka, barista, cilmi baarista sayniska, ka hortagga, daryeelka caafimaadka iyo dhaqan celinta.
Isbitaalku wuxuu gaarayaa dhul dhan 500,000 oo mitir murabac ah iyo goob dhisme oo dhan 530,000 oo mitir murabac ah. Waxay leedahay 1 waax bukaan-socod, 11 waaxood bukaan-jiifka iyo 4 "isbitaallo dhexdhexaad ah" -Rheumatism hospital, isbitaalka cudurada wadnaha, isbitaalka wajiyada iyo isbitaalka sonkorowga. In ka badan 4500 oo shaqaale ah ayaa jooga cisbitaalka. Maaddaama ay tahay Kulliyadda Caafimaadka ee Kliinikada labaad ee Jaamacadda Caafimaadka ee Harbin, waxay leedahay 3 darajo oo shahaadada dhakhaatiirta ah oo bixisa dhibco edbinta heerka koowaad, 21 darajo dhakhtar oo bixisa dhibco maadooyin heerka labaad ah, iyo 33 dhakhtar iyo shahaadada mastarka oo bixiya dhibco maadooyin heerka saddexaad ah.
Isbitaalka dhexdiisa, waxaa kuyaala 5,200 mitir murabac oo dhisme madaxbanaan oo madaxbanaan, 5,000 oo mitir murabac ah "Xarunta Baadhista Imtixaanka Tijaabinta Qaranka" iyo "Xarunta Waxbarida Imtixaanka Qibradeed ee Qaranka", 22,000 mitir murabac oo "saldhiga tababarka caafimaadka ee dhaqtarka guud", 14,000 mitir laba jibbaaran guryaha fasalka koowaad iyo 16,000 mitir murabac oo ah qolal ka qalin jabiyay. Laga soo bilaabo qorshihii shanaad ee shanta sano, 18 buugaagta qorshaynta qaranka ah iyo buugaagta maqalka iyo muuqaalka ah intabadan waxaa tafatiray dadka ay khusayso ee cisbitaalkeenu, 12 buugaagna waxaa tafatiray asxaabteena shaqaalayaal tafatirayaal halka asxaabta kale qaarkood ay kaqeybqaateen tafatirka 47 buugaag. . Seddexdii sano ee la soo dhaafay, wadar ahaan 51 mashruuc oo waxbaris oo ka sarreeya heerka waaxda magaalada ayaa la oggolaaday, oo ay ku jiraan 1 mashruuc CMB; 19 natiijo waxbarid oo ka sareysa heerka waaxda magaalada ayaa la helay; Waxaa la daabacay 94 waraaqood oo qaran. Si firfircoon u fuliya is-weydaarsiga shisheeye iyo iskaashiga, xiriir aad u ballaaran la leh 26 jaamacadood iyo iskuulo caafimaad, oo ay ku jiraan Jaamacadda Pittsburgh, Jaamacadda Miami, iyo Jaamacadda Toronto ee Kanada, waxayna sameeyeen iskaashi cilmi-baaris oo tiro badan.